LG G2 တွင်နှစ်ဆပုတ်ပါ Androidsis
ဒါဟာပြီးနောက်အလွန်ဖွယ်ရှိသည် LG G2 ကို flash လုပ်ပါ Cooked Rom မှတရားဝင် LG စတော့ရှယ်ယာအချို့သို့မဟုတ်လက်ရှိ LG G3 ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ပင်အခြေခံပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနှစ်ဆသောလုပ်ဆောင်မှုကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုသော့ခတ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သော့ဖွင့်ခြင်းမပြုနိုင်သော bug ။
ဒီလက်တွေ့ကျပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာသင့်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသင်ပေးသွားမယ် ဖန်သားပြင်ကိုပိတ်ထားရန်နှင့် LG G2 တွင်နှစ်ဆထိပုတ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Android ဆိပ်ကမ်း၏။ ဒါကြောင့်ဒီပြproblemနာဒါမှမဟုတ်အမှားကိုသင်ရုတ်တရက်တွေ့ရင်၊ အောက်မှာရှင်းပြမယ့်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမလွဲမရှောင်သာသင့်အားအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
ငါပြောရမည့်အချက်ကိုငါပြောရမည်မှာ၊ ဖန်သားပြင်ကိုပိတ်ထားရန်နှင့် LG G2 တွင်နှစ်ဆထိပုတ်ပါပရိုဂရမ်သို့မဟုတ် application ကို download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ လျှို့ဝှက် LG service menu ကိုသာ ၀ င်ရောက်ရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းမှ option တစ်ခုကိုနှိပ်ရုံဖြင့်၎င်းကိုပြန်လည်ရယူပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာဒီထဲမှာပြောနေစရာမလိုပါဘူး LG ဝန်ဆောင်မှုမီနူး အသုံးမ ၀ င်သော၊ အသုံးမဝင်သောအရာများကိုမကိုင်တွယ်ပါနှင့်မထိပါနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုပုံဖော်။ မရပါက။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် LG G2 ၏ dialer (သို့) dialer ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါကုဒ်ကိုရိုက်ပါ။
3845 # * LG က G2 # မော်ဒယ်
ယုတ္တိနည်းအရ LG G2 model ပြောသောနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏တိကျသောမော်ဒယ်ဖြင့်အစားထိုးရန်လိုသည်။ ဤကိစ္စတွင် D802 မော်ဒယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ dialer ထဲရှိထိုကုဒ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လျှို့ဝှက်ထားသော menu အသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါက LG service menu ပါ LG G2 ကိုသော့ဖွင့်ပြီးသော့ဖွင့်ရန်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ဒီအတွင်းပိုင်း Hiden မီနူး ကျနော်တို့ option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ် သတ်မှတ်ချက်များ:
ထိုအခါငါတို့သည်ကပြောပါတယ်သော option ကိုရှာသည်အထိသွားလိမ့်မည် Touch Firmware ကို Update လုပ်ပါ:
မည်သည့်အရာမျှဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်လိုက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် ငါတို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်တယ် LG G2 ကိုသော့ခတ်ပြီးသော့ဖွင့်ရန်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ထားရန်နှင့် LG G2 ပေါ်ရှိနှစ်ချက်ပုတ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်
ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်အတွင်းခေါ်ဝေါ်သောပြproblemနာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် lg g5.1 တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း remix2ကိုသုံးနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ပုံစံသည် ၈၀၂ ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကုဒ်နံပါတ်နှင့်လျှို့ဝှက်မီနူးကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကြည့်ပါ ဦး!
ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလိုက်မလဲ။ adobe flash player ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် firmware ကို jelly bean သို့ကူးယူပြီးတဲ့နောက်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ပစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်တိုတိုလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားမိတယ်။ အများကြီး။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် code ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းသည် LG g2 mini ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုဒ်နံပါတ်ချပြီးပါကမပြင်ဆင်နိုင်ပါ။ အခြားအဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။
မိုင်းလည်း g2 mini ဖြစ်ပြီးငါဒီနည်းနဲ့အခြားဖြေရှင်းချက်မအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီလော
ကောင်းပါတယ်။ ငါ lg g2 D800 ရှိတယ်။ ငါ့ကိုဒီနည်းလမ်းကမကူညီဘူး
ဒီ lg g2 mini မှာဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစမ်းကြည့်ပါ
မှာ Oliver ဟုသူကပြောသည်
LG G3 မှာ D722p ကို Beats လုပ်မလား။
သင်ကအကောင်းဆုံး corduroy ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Raul ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
2G ကိုပဲဘယ်လိုသုံးနိုင်လဲ။ ဒီမှာ 3G signal ကမကောင်းဘူး။ 2G မှာပဲရချင်တယ်
Raul Fernandez အားပြန်ကြားပါ